ओमनमा शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन
ओमन । ओमानमा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन प्रशिक्षण सहित राजधानी मस्कट सम्पन्न भएको छ । ओमन नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा नोभेम्बर ११ का दिन सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजका महासचिव शोभाकान्त लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यता तथा ओमन नेपाली एकता समाजका का.वा. अध्यक्ष जिबी लामाको अध्यक्षता सम्पन्न सो समारोहमा सल्लाहकार शालिकराम आचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो । बुद्ध विकको सञ्चालनमा अघि बढेको समारोहको प्रमुख अतिथि शोभाकान्त लामिछाने द्वीप प्रज्ज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा रक्तिम अभियान ओमनका अध्यक्ष नारायण ज्ञवाली, एकता समाज महिला विभागकी सचिव कमला खनाल लगायत विभिन्न एरिया तथा विभागका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यस लगत्तै ओमन नेपाली एकता समाज अलखुवैर एरिया समितिको आयोजनामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता एरिया समितिका सदस्य तथा महिला विभागकी उपाध्यक्ष मनु सुनारले र सञ्चालन एरिया सदस्य कुमारी तितुङले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा शोभाकान्त लामिछानेले एकता समाजको स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको भूमिका, जनवादी केन्द्रीयताबारे, नारायण ज्ञवालीले दर्शनशास्त्र र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र यसको महत्वबारे, जिबी लामाले सङ्गठनात्मक पद्धति, यसको महत्व र अनुशासनबारे, तुलसीराम खनालले कार्यकर्ता र नेतृत्वबीचको अन्तरसम्बन्ध, इन्द्रलाल खनालले रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको भूमिका र गीता लिम्बूले ओमनमा महिलाहरूको अवस्था र सङ्गठनमा खेलेको भूमिकाबारे छलफल चलाउनु भएको थियो । कार्यक्रममा एरिया समितिकातर्फबाट सचिव भिम भट्टराईले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।
जुलुस सहित शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन
रोल्पा । राजमो रोल्पाको आयोजनामा अक्टोबर क्रान्तिको शततावार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन जुलुस सहित सम्पन्न भएको छ । २०७३ कार्तिक २२ गतेको दिन रोल्पाको सदरमुकाम साततालेबाट गगनभेदी नारा सहित निस्केको जुलुस खुला मञ्चमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला अध्यक्ष मेघनाथ बिष्टले, सञ्चालन हस्तमणि पुनले गर्नु भएको थियो । जातीय समता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर विकको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राजमो क्षेत्र नं. १ का अध्यक्ष खिमलाल विष्ट, क्षेत्र नं. २ का अध्यक्ष भागीराम विक, युवक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष डम्बर खड्का, जनजाति सम्मेलनका जिल्ला अध्यक्ष मोहन बुढा, अखिल (छैठौँ) का जिल्ला अध्यक्ष आकाश गिरी, किसान सङ्घका जिल्ला सदस्य भिक बहादुर पुन, महिला सङ्घकी जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रा सिहँ, रक्तिमका जिल्ला अध्यक्ष खगेन्द्र विष्ट, पत्रकार मिनराज रोका, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पवन कुमार, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला का.वा. सभापति खडक बहादुर खत्री लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा स्वागत भागिराम विकले गर्नु भएको थियो ।
त्यसै गरी, सुलीचौर बजारमा कार्तिक २४ गते रुनीबाङबाट निस्लेको जलुस सुलीचौर मैन बजारको पिपल चौतारामा पुगी सभामा परिणत भएको थियो । आकाश गिरीको सञ्चालनमा सुरु भएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता खिमलाल विष्टले र स्वागत अनराम पुनले गर्नु भएको थियो । समता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर विकको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सभामा विशेष अतिथि हस्तमणि पुन र अन्य अतिथिहरूमा राजमो क्षेत्र नं. २ का अध्यक्ष भागीराम विक, जनजाति सम्मेलनका जिल्ला अध्यक्ष मोहन बुढा, किसान सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष वीर बहादुर रोकाय, युवक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष डम्बर खडका, अखिल (छैठांैं) जिल्ला समितिका रमेश पुन, रक्तिम जिल्ला समितिका खगेन्द्र विष्ट, महिला सङ्घ जिल्ला समितिकी प्रतिभा विक लगायत हुनु हुन्थ्यो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा रोल्पाले नुवागाउँस्थित अरनिको उमावि प्राङ्गणमा २०७३ कार्तिक २८ गते अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन सभा सम्पन्न गरेको छ । राजमो रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ को आयोजनामा सो सभा सम्पन्न गरिएको हो । २०७३ कार्तिक २२ गते सदरमुकाम लिवाङमा भव्य सभा गरी राजमो रोल्पाले अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि गाउँ गाउँमा उद्घाटन सभाको कार्यक्रमलाई एक हप्तासम्म अगाडि बढाउने योजना अनुरूप नुवागाउँमा कार्तिक २८ मा सो सभा सम्पन्न गरिएको हो ।
सभाको प्रमुख अतिथि जातीय समता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर विक हुनु हुन्थ्यो । सभामा विशिष्ट अतिथि राजमो रोल्पाका अध्यक्ष मेघनाथ विष्ट रहनु भएको थियो । राजमो रोल्पा २ नम्बर क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष भागिराम विकको अध्यक्षता, सचिव डम्मर खड्काको सञ्चालन र जिल्ला समिति सदस्य हर्क पुनको स्वागत मन्तव्यबाट सभाको कार्यक्रम अघि बढेको थियो । सभालाई राजमो रोल्पाका सल्लाहकार हस्तमणि पुन, युवक सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष्ँ भिम बुढा, जनजाति सम्मेलनका जिल्ला समिति सदस्य मोहन सिंह बुढा, समता समाजका जिल्ला कोषाध्यक्ष चित्र बहादुर परियार, महिला सङ्घ रोल्पाकी सदस्य निमा विक, किसान सङ्घ रोल्पाका सदस्य हित बहादुर पुन, रक्तिम सांस्कृतिक अभियान २ नं. क्षेत्रीय समिति रोल्पाका अध्यक्ष्ँ टीका पुन र अखिल (छैठौँ) का प्रतिनिधि रमेश पुनले समेत सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी अभियान जारी
दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम सञ्चालन गरी रहेको छ । यसै क्रममा राजमो क्षेत्र नं. १ देउखुरीले कार्तिक २५ गते देउखुरीको गढवामा शतवार्षिकी अभियानको उद्घाटन गरिएको छ । क्षेत्र नं. १ का अध्यक्ष गुणनिधि शर्माको अध्यक्षता तथा किसान सङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रेम नारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष रेशम बिसी, एरिया नं. १ का इन्चार्ज महेश रिजाल, शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य कपिल देव खनाल, राजमो गढवाका अध्यक्ष दिनमणि आचार्य लगायतले बोल्नु भएको थियो । राजमो गढवाका सचिव खुमानन्द पोख्रेलको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको सभालाई एरिया नं. १ का सचिव टुकमान कुँवरले सञ्चालन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा रक्तिमका कलाकारले गीत तथा नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
शतवार्षिकी कार्यक्रमको साप्ताहिक उद्घाटन सम्पन्न
रूपन्देही । अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको साप्ताहिक उद्घाटन कार्यक्रम अन्तर्गत २०७३ कार्तिक २५ गते रूपन्देहीको रामापुर क्याम्पसमा सभा सम्पन्न भएको छ । दल बहादुर मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता राजमो रूपन्देही सचिव दिपक पौडेलले अक्टोबर क्रान्तिले स्थापित गरेका मूल्य–मान्यताको विषयमा चर्चा गर्नु भएको थियो । नर बहादुर थापाको सञ्चालनमा अगाडि बढेको कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष गणेश गौतमले मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
२०७३ कार्तिक २६ गते रुद्रपुरको हरैयामा सभा सम्पन्न भयो । लीलाराम खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा प्रमुख अतिथि राजमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रे आलम हुनु हुन्थ्यो । सभामा नेकपा (मसाल) रूपन्देही प्रवक्ता लेखनाथ शर्मा, राजमो सचिव दिपक पौडेल, वामपन्थी बुद्धिजीवी नेत्र नारायण शर्माले मन्तव्य दिनु भएको थियो । सभाको सञ्चालन भिम बहादुर सिंजापति र स्वागत हेमराज ढकालले गर्नु भएको थियो ।
सोही दिन रूपन्देहीको तिलोत्तमामा सभा सम्पन्न भयो । बालानन्द घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाका प्रमुख अतिथि राजमो पूर्व महासचिव सन्त बहादुर नेपाली हुनु हुन्थ्यो । कार्यक्रममा राजमो रूपन्देही सल्लाहकार दल बहादुर भण्डारीले पनि धारणा राख्नु भएको थियो । सभाको सञ्चालन दयानिधि पौडेलले गर्नु भएको थियो ।
२०७३ कार्तिक २७ गते रूपन्देहीको भैरहवामा उद्घाटन सभा सम्पन्न भयो । सभामा प्रमुख अतिथि राजमो रूपन्देही सल्लाहकार दल बहादुर भण्डारी हुनु हुन्थ्यो भने नेकपा (मसाल) जिल्ला प्रवक्ता लेखनाथ शर्मा र राजमो सचिव दिपक पौडेलले मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रम जारी
बर्दिया । २०७३ कार्तिक २२ गते जिल्ला सदरमुकाम गुलरियामा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन सभा सम्पन्न भएको छ । राजमो जिल्ला उपाध्यक्ष निर्मला अर्यालले सभाको अध्यक्षता गर्नु भएको थियो भने वैकल्पिक जिल्ला सदस्य नुमलाल रेग्मीले सञ्चालन गर्नु भएको थियो । जिल्ला सचिव लोक बहादुर रानाको स्वागत भाषणबाट अगाडि बढेको सभालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा राजमो केन्द्रीय सदस्य राजाराम चौधरीले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । सभालाई वामपन्थी नेता तुलसीराम सापकोटा, राजमो जिल्ला सदस्य रतन सिंह रावत, जिल्ला सल्लाहकार युवराज ढकालले सम्बोधन गर्नु भएको थियो । सभामा अखिल नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानचन्द अर्यालको पनि आतिथ्यता रहको थियो ।
कार्तिक २३ गते भुरीगाउँ बजारमा कोणसभा सम्पन्न भएको छ । सभालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा राजमो केन्द्रीय सदस्य राजाराम चौधरीले सम्बोधन गर्नु भएको थियो भने अन्य वक्ताहरूमा वामपन्थी नेता तुलसीराम सापकोटा र राजमो जिल्ला सचिव लोक बहादुर राना हुनु हुन्थ्यो । सभाको सञ्चालन नुमलाल रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।
कार्तिक २६ गते जयनगर बजारमा कोणसभा सम्पन्न भयो । सभालाई वामपन्थी नेता तुलसीराम सापकोटा, व्यापार सङ्घका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानचन्द अर्याल, किसान सङ्घका जिल्ला संयोजक तोयानाथ अधिकारी र राजमो जिल्ला कोषाध्यक्ष यम प्रसाद सुवेदीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन नुमलाल रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।
शतवार्षिकी कार्यक्रम शुभारम्भ
काभ्रे । राजमो जिल्ला समिति काभ्रेले २०७३ कार्तिक २७ गते जनगालमा उद्घाटन सभा गर्दै अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । सो उद्घाटन सभाको प्रमुख अतिथि राजमोका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य एवं बागमती क्षेत्रीय समितिका सदस्य शिवहरि खनाल रहनु भएको थियो । शतवार्षिकी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि खनालले रूसमा १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति विश्वभरिका सर्वहारा वर्गका निम्ति प्रेरणा र उर्जाको स्रोत भएको बताउनु भयो । सभालाई राजमो काभ्रे जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष ओमकार थापा, कोषाध्यक्ष जानकी श्रेष्ठ र पनौती नगर समितिका अध्यक्ष कुलराज सापकोटाले समेत सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।
सभा राजमो काभ्रेका अध्यक्ष सुवर्ण विक्रम थापाको अध्यक्षता र सदस्य अर्जुन चौलागाईको सञ्चालनमा अघि बढेको थियो । सभामा अध्यक्ष थापाले जिल्लामा गरिने अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रमको तालिका समेत घोषणा गर्नु भएको छ ।